Sida loo Guba Kodak Videos in DVD ee Tayada Sare
> Resource > Video > Sida loo Guba Kodak Videos in DVDs
Kodak taxane ah kaamirooyin digital caanka ah, sida Kodak Easyshar, Kodak PlayTouch, iyo Kodak PlaySport iwm camera Tani waxay u qoraan karaan videos ee tayo sare leh, taas oo kaa caawin kara inaad u qoraan oo dhan daqiiqado ku faraxsan yahay ama scences muhiim ah oo nolol maalmeedka. Marka aad qaadatay badan oo xusuus videos aad camera Kodak, waxaa jira fursad aad rabto in aad ku gubi aad Kodak videos in DVD-ilaalinta ama loo maqli karo ciyaartoy DVD standalone iwm Kodak videos yihiin usullay kaydiyaa MOV ama qaab MP4. Sidaas daraadeed waxaad u leeyihiin in ay isticmaalaan qalab DVD weyn gubashadii caawin kara MOV iyo qaab MP4 labadaba.
Wondershare DVD abuuraha ( DVD Creator for Mac ) waa mid ka mid ah doorashooyinka ugu wanaagsan ee aad u gubi Kodak videos in DVD. Waxa ay taageertaa ku dhawaad ​​qaab video kasta. Sidaa daraadeed, waxaad si fudud oo dhaqso gubi kara DVD xirfadle-raadinta via kaliya si fudud doorashada ka badan oo lacag la'aan ah iyo qabow template DVD menu, iyo tafatirka Kodak videos qalab kala duwan oo tafatir si sahlan loo isticmaalo. Iyo Qodobka halkan ku siinayaa Hanuuniye faahfaahsan. Dadka isticmaala Windows gudbin karaan in ay talaabo talaabo ah. Inkasta oo dadka isticmaala Mac, habka uu yahay mid aad la mid ah.
1 dejinta aad Kodak videos to this gubi Kodak
First of dhan, furaysto aad camera Kodak galay pc, ka dibna lagu wareejiyo oo dhan videos aad rabto in aad computer. Ka dib markii aad Kodak videos horay u keeno si ay computer ka, kaliya aad u sii wadaan in ay dajiyaan videos, kuwaas oo si app this si ay u gubaan DVD ah.
Orod Kodak si DVD gubi, ka dibna aad sidoo kale riixi kartaa ah "Import" button dhanka bidix ku darto Kodak videos ama la furo gal meesha ay ku kaydsan yihiin videos si toos ah jiidi videos aad rabto in aad codsigan.
Marka videos keeno waxay ku qoran yihiin dhanka bidix, waxaad u habayn karaan si play adigoo riixaya "↑" ama "↓" ikhtiyaarka ugu hooseysa ka. Haddii aad rabto in aad ku darto horyaal oo dheeraad ah si loo abaabulo videos, kaliya riix "dar horyaalka" button rukun bidix ee ugu hooseysa interface ah si ay shaqo taas loo sameeyo.
2 Samee DVD menu iyo edit Kodak videos (optional)
Haddii aad u baahan tahay in aad xaalkaa Kodak video footage si kor loogu qaado saamaynta, waxaad isticmaali kartaa qalabka tafatirka anfacaya ay bixiyaan app this. Bandhigaan horyaalka video aad rabto in aad wax ka bedel dhanka bidix, ka dibna ka soo hadhay waxaad ka arki kartaa qalinka icon ah. Just waxa guji si aad u hesho qalabka tafatirka, kuwaas oo sida beerista, falinjeeerka, qoqobada, isagoo intaa ku daray Cinwaan, watermark iyo in ka badan.
Si aad menu DVD DVD aad ah, u tag tab Menu on sare ee suuqa kala app ee, kadibna slider dhinaca midig xitaa dhan arrimo DVD menu, ugu dambeyntii, shaki guji mid aad jeceshahay si ay u codsan. Next, aad astaysto thumbnail, qoraalka, soo jeeda ama ku darto music soo jeeda iwm Haddii aad rabto in aad ka dooran karto more arrimo free menu , waxaad riixi kartaa batoonka cagaaran hoos arrow si ay u soo bixi online.
3 xiisaha leh saamayn iyo gubi Kodak videos in DVD
Ka hor inta aadan bilaabin Kodak videos in DVD gubashada, waxaad u baahan tahay in ay ku eegaan mashruuca oo dhan si loo hubiyo in saamaynta final. Marka aad ku qanacsan la, kaliya aad geliso DVD disc maran in DVD drive aad. (Fiiro gaar ah: Waxaa jira bar cagaaran ee hoose, taas oo ku tusineysa baaxadda dhan videos daray iyo sawiro Sida laga soo xigtay waa in, waxaad go'aansan kartaa in aad is geliso DVD5 ama disc DVD9..)
Next, riix "Guba" tab ugu sareysa, ka dibna sax ah "Guba si disc" doorasho. Sidoo kale waxaad dooran kartaa "Save sida ISO" simulteneously. Ugu dambeyntii, riix badhanka Gubashada ay u bilaabaan gubanaya Kodak videos in DVD. Marka hawsha gubanaya la dhamaystiro, DVD ah disc Writen tuurid si toos ah.
Fiiro gaar ah: Haddii mashruuca DVD aad ka ballaaran yahay 4.7G oo aadan haysan disc DVD9 ah, kaliya geliso disc D5 ah, Kodak si DVD gubi si toos ah u cadaadin doonaan.